Ukulunywa kwesimo esingavamile ngokuvamile kubonakala ezinganeni kuphela, kodwa nakubantu abadala. Kuyabonakala lapho amazinyo omabili omabili ehlanganiswa ngokungalingani. Nokho, ungakwazi ukulungisa inkinga. Uma intsha igqoka ama-brace emazinyweni awo aklanyelwe ukuqondisa ukuluma, abantu abadala, ngaphandle kwalendlela, bangalungisa ukuluma ngaphandle kwama-braces.
Ungasebenzisa izindlela eziningana zokuqeda ukukhubazeka: indlela yokuhlinzeka, abaqeqeshi, izikhwama zeplastiki, kanye nokubuyiswa kwezobuciko. Ngaphambi kokulungiswa kokulunywa ngaphandle kwe-braces, kubalulekile ukuthola ukuthi yiziphi izinhlobo zokwephulwa okwenzekayo.
Uma umhlathi ophansi ungathuthuki kahle, futhi umhlathi ophezulu uphambili, khona-ke isici esinjalo sibizwa ngokuthi i-distal. Uma umhlathi ophansi uphambili , khona-ke le nsalela ibizwa ngokuthi i-mesial. Uma i-bite ivulekile, amazinyo awavali nje. Ungase futhi uqaphele ukujula, noma ukudubula. Futhi uma amazinyo ayakhula hhayi lapho kufanele khona, ukwephulwa okunjalo kubizwa ngokuthi i-dystopia.
Isizathu sokuphulwa kungaba ukuzalwa, ukukhulelwa okukhulu, imikhuba engalungile ebuntwaneni, kanye nokuntuleka kokuncelisa. Uma umhlathi ungenawo amazinyo amaningana noma uma umuntu emele, lezi zici zingaphazamisa ukuluma. Endabeni yethonya lezakhi zofuzo ukulungiswa kokulunywa ngaphandle kwama-brace akusizo. Kubantu abanjalo, udokotela wamazinyo ubukela kusukela ebuntwaneni futhi uzama ukulungisa isimo samazinyo ngosizo lwezakhiwo ezimile.
Ukulungiswa kokulunywa ngaphandle kwe-braces kuhilela ukusebenzisa izakhiwo zesikhashana - isibonelo, i-cap, ezenziwe nge-polyurethane noma i-silicone ngayinye kwisiguli ngasinye. Ukuze ulungise ukuluma, ama-capsules eziningana azodingeka. Azibangeli ubuhlungu noma azizwanga kahle, ikakhulukazi ngoba azikwazi ukubonakala emazinyo. Lawa madivayisi angasuswa kalula nganoma yisiphi isikhathi.
Abaqeqeshi inguqulo engabizi yemiklamo. Zenziwe zithobekile kunamaqhwa, futhi zikhonza ukulungisa amaphutha amancane. Ayenziwa ngezindlela ezizimele.
Phakathi kweziguli ezikhulile, ukulungiswa kokulunywa kokuhlinzwa kuvamile kakhulu. Isetshenzisiwe uma isici singenakulungiswa ngokuhlukile noma uma ukulungiswa kudinga kwenziwe ngokushesha.
Naphezu kwezindleko eziphezulu zokusebenza, kanye nesimo sayo esiyinkimbinkimbi, ngezinye izikhathi kuyisindiso kuphela kwesiguli.
Ukulungiswa kokusobala kusetshenziselwa ukuhlinzwa uma ukulinganisa kwesiguli ngenxa yesilungiselelo esingalungile samazinyo, amazinyo ayisisekelo awavale noma kunesifo esibucayi sezofuzo.
Uhlobo ngalunye lokusebenza lunalo izici zalo futhi lwenziwa ngezindlela ezahlukene: ngaphansi kwe-anesthesia yendawo noma ejwayelekile, emgodini womlomo noma ngenye indlela. Ngezinye izikhathi ngemuva kokuhlinzwa, iziguli zilokhu zigqoka ukulungiswa okukhethekile okwesikhashana, ezigcina umhlathi endaweni efanele. Kunoma yikuphi, ukutakula ngemuva kokusebenza kuyindlela enhle kakhulu.
Amazinyo e-Whiten angalimazi ku-koqweqwe lwawo
Indlela yokwenza umbhalo esithombeni - izindlela ezintathu izinhlelo ezintathu
"Umbusi Nicholas 1" - yempi ka ngaphansi koMbuso Russian